ရရှိ - လျှင်မြန်စွာအစှမျးသတ်တိနှငျ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုးမြှင့်ဖို့ရှာကြံပိန်လူတို့တွင်ရေပန်းစားသောအားကစားအာဟာရ။ ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်တစ်ခုကြွယ်ဝသောစည်းစိမ် (70-90%), အအားကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီအစုမှာပါအထပ်ထပ်၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ - ထိုထို့အပြင်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်။ အဆိုပါကျန်ရှိနေသော 10-30% - ပရိုတိန်း, ထိုသို့ထိရောက်စွာကြွက်သားတစ်သျှူးပြုပြင်ကူညီပေးသည်။ သို့သော်ဤထို့အပြင်အားလုံး fit ပါဘူး - အောက်တွင်အကြောင်းကိုဖတ်ပါ။
အားကစားအာဟာရ: ပရိုတိန်း, Creatine သည်နှင့်အလေးချိန်ရရှိ?
ပရိုတိန်း - ပရိုတိန်းကိုပထမဦးဆုံးအရာအာဟာရနှင့်ပြုပြင်ရေးကြွက်သားတည်းဟူသောသန့်ရှင်း၏။ ဒါဟာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးကိုလကျခံနိုငျသညျ။ ဒါဟာပရိုတိန်းသည်းမခံခြင်းမှမခံစားဘူးသောသူအပေါင်းတို့မှလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
Creatine - ပရိုတိန်းအတွက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကနေခန္ဓာကိုယ်ကဖန်တီးနေတဲ့ဥစ္စာကိုခှဲဝေနေကြသည်။ နောက်ထပ်အလျင်အမြန်စွမ်းအင်နှင့်အတူကြွက်သားထောက်ပံ့ဖို့ကူညီပေးသည်, သူ၏အဓိကအောင်မြင်မှု - အစွမ်းသတ္တိ, သည်းခံခြင်း (ဥပမာ - အဘို့, Sprint, အထူးသဖြင့်တိုတောင်းလိုအပ်ကြောင်းအားကစားအတွက်အစွမ်းထက်လူရှုပ်) ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိ - ပစ္စည်းဥစ္စာ၏အခြားအမိန့်, လေ့ကျင့်ရေးနေစဉ်အတွင်းစွမ်းအင်၏ကြီးမားသောထောက်ပံ့ရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဖြည့်စွက်ယူခြင်း, ယင်းအားကစားသမားအခိုင်အမာနဲ့ကြွက်သားကြီးထွားပိုမြန်ဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာမဆိုအားကစားအာဟာရကဲ့သို့အလေးချိန်ရရှိလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ, သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာပြုလုပ်၏ပါဝါကိုအားကစားအတွက်စေ့စပ်မရကြသူအဝလွန်, အဝလွန်သောလူနှင့်အမျိုးသမီးဖြစ်လေ့ရှိသောသူအပေါင်းတို့ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကြောင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အစာကို၏စည်းစိမ်ရှိအမြတ်များ၏အန္တရာယ်သည်သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီတစ်သျှူးမှန်ကန်သောသောက်သုံးသောမှာမဟုတျပါဘူးများပြားသည်ဟုဆိုလိုသည်သောကယ်လိုရီအတွက်လွန်းကြွယ်ဝနေသည်။
အားကစားအာဟာရ "ရရှိ": ဘယ်လိုလုပ်?
ဤအမျိုးအစားများ၏ဖွဲ့စည်းမှုအားကစားဖြည့်စွက်ရရှိနှင့်ပူးတွဲအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အဆီ၏အသွင်အပြင်နီးပါးမလွှဲမရှောင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကယင်းကဲ့သို့ဂျဧည့်ခံဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်:
လေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်ရုံ 15 မိနစ်အတွင်းရရှိမသောက်ရ - အစာရှောင်ပြန်လည်နာလန်ထူပါဝါအဘို့။
လေ့ကျင့်ရေးမီနှင့်အပြီးရရှိမသောက်ရ - ဒါကြောင့်အတန်းအဆီကာလအတွင်းကမကျွမ်းလောင်၏, ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန်အလေးချိန်ရဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ်။
3-4 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ရရှိမသောက်ရ - ဤအစီအစဉ်မှသာအလေးချိန်ရဖို့ရန်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်လိုသူပိန်ယောက်ျားအဘို့ဖြစ်၏။
ရရှိမကြာခဏအဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်တစ်ခုတိုးစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစာရှောင်ရာဇီဝြဖစ်ကြသောသူတို့အဘို့, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောက်မက်ဘွယ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ ရုံအားကစားမတိုင်မီဖြည့်စွက်ယူ - သင်ကြီးမားတဲ့အတွက်တိုးလာကြောင်းသတိထားမိလျှင်။
Soy ပရိုတိန်း - အကောင်းအဆိုး cons
နော်ဒစ်လျှောက်လှမ်းခြင်း - contraindications
ဗစ်တိုးရီးယား - ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်စောင့်ရှောက်မှု
လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ 10 နှစ်အထိမ်းအမှတ်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဝတ်သေတ္တာ - သူတို့ဘာတွေဖြစ်ကြပြီးအဘယ်အရာကိုအမျိုးသမီးရဲ့ခါးအိတ်ဝတ်ဆင်နည်း
မည်သို့ပါးလွှာရှိ Marina Afrikantov?
အိန္ဒိယ - ရုရှားများအတွက်ဗီဇာ
ပရိဘောဂ - ဗီရို